Maqaal: “DAGAALLADII SOKEEYE IYO NABADEYNTA UMMADDA SOOMAALIYEED” Qeybtii labaad
Maqaal:“DAGAALLADII SOKEEYE IYO NABADEYNTA UMMADDA SOOMAALIYEED” Qeybtii labaad
“DAGAALLADII SOKEEYE IYO NABADEYNTA UMMADDA SOOMAALIYEED” Qeybtii labaad
Walaalayaal, sidaad la socotaan dagaallo waaweyn ayaa ka dhacay Adduunweynaha qarniyadii la soo dhaafay iyo qarnigaanba, dagaalladaas wax badan baa ku burburay , malaayin qofna waa ku hoobteen, haddana wax Kastoo dhacay, intii soo hartay oo miyirku ku haray ayaa dalalkooda u istaagey oo xalliyey mashaakiilkii sababay colaadahaas waaweyn. Ruwaanda, waad la socotaan maanta meesha ay mareyso, iyo sida madaxdeedii ugu istaagteen deminta dhibaatooyinkii horay u dhacay. Maanta Ruwaanda, waa Dalka keli ah oo Afrika lagu sheego iney ku guuleysteen iney musuqmaasuqa Afrika cammimay, ka tirtiraan maamulka Dawladdooda iyo Dalkoodaba,kadib markey nabadeeyeen Dalkoodii iyo dadkoodi sida xun isu laayey. Ugu horraan, aan iskadeyno qabyaaladda iyo xumaanteeda, aan bilowno qaddarinta kuwa aqoonta leh oo inoo dhisi kara dalkeenna , kuwa aan waxbaranna aan wax barno, aan musuqmaasuqa dalkeenna ka tirtirno oo nolol xalaal ah u horseedno ummaddeenna. Isla markaana xoojinno Diinteenna iyo dhaqankeenna soo jireenka ah. WAA MAXAY FARQIGA U DHEXEEYA NABADDA IYO COLAADDA?
Nabadda waxbaa lagu dhisaa.
Nabadda horumar baa lagu gaaraa.
Xilliga nabadda waxaa kobca dhaqaalaha, dalkuna waa barwaaqo.
Waqtiga nabadda caruurteennu waxbarasho ayey u dareereysaa.
Waqtiga nabadda , dadku waa is-jecelyahay.
Xilliga nabadda, dalku waa xasilloon yahay,dadkuna miyir ay ku fakaraan bey qabaan.
Xilliga nabadda, dadku waa mideysan yahay.
Xilliga nabadda, Adduunka kale waa ku qaddarinayaa ,asxaab badanna waad ku leedahay.
Diinteennu waxay na fareysaa, nabad inaaan ku wada noolaanno.
Xilliga nabadda, dadku waxay ku noolyihiin farxad iyo baqdin la’aan.
Iyo waxyaabo kaloo badan oo aanan xusin.
Intaan kor ku soo qoray caksigeeda ayaa colaadda laga dheefaa.Marka,Soomaaliyeey,ma Jidka toosan oo Nabadda ayaan doorannaa, mise jidka qalloocan oo colaadda ayaan raacnaa?Ma waxaan u istaagnaa inaan horumar gaarno, mise qabyaalad iyo horumar la’aan ayaan tibaahnaa?
Qeybtii hore ee maqaalkii “ Dagaalladii sokeeye iyo Nabadeynta ummaddeenna” waxaan ku xusay in loo baahan yahay, in Dadweynaha soomaaliyeed is- cafiyaan, iyadoo guud ahaan Dalka laga abaabulayo, shirar badan iyo wacyigelin joogto ah, si loo soo celiyo nabaddii iyo is-aamminkii dadka u dhexeeyey dagaalladii sokeeye wixii ka horreeyey, iyo inaan Dalkeenna dib ugu soo dhisno, annagoo iskumeel ka miiseyna. Madaxda soomaaliyeed iyo qofkastoo wax garad ahba waxa laga doonayaa inuu isu xilqaamo arrintaas. Waxaan tilmaamay qeybo muhim ah, sida Dawladda Iyo Hey’adaheeda kala duwan, Baarlamaanka cusub,Isimmaa,Nabadoonnada iyo Culimmada soomaaliyeed,Haweenka iyo Ururradooda, dhallinta iyo Xarumaha wax barashada guud ahaan , qurbajoogta iyo fannaaniinta soomaaliyeed iyo qeybo kaloo faro badan. Giddi waxaan ku boorrinayey iney isu-taagaan nabadeynta iyo Dib-u-heshiisiinta dadkooda iyo Dalkoodaba. Waxaan kaloo xusay inaan arrimaha Nabadeynta qof looga maarmi karaa uusan jirin, maadaama dhammaan arrintu ina wada khuseyso oo ay dan inoo wada tahay.Quraankeenna kariimka ah , aayadda labaad ee suuradda ALMAA’IDA, waxay na fareysaa sidatan:“Iska kaashada wixii san iyo cabsida Alleba, hana isugu kaalmeynina denbiga iyo colaadda, kana baqa Ilaaha ciqaabtiisu daran tahay” " وتعاونوا على البر و التقوى ولا تعاونوا على الإثم و العدوان و اتقوا الله إن الله شديد العقاب " سورة المائدة .
Walaalayaal, waxaan nahay dadka ugu nasiib badan Adduunka maanta la joogo, sababtoo ah Ilaaheen wuxuu na siiyey Dal naga badan, barwaqo ah, oo kheyraad badani dhex jiifo. Waa inaan ku shukrinaa ALLAHA dhulkaas nagu manneystay.Waxaannu u baahannahay oo keliya, madax wanaagsan oo ilaah ka cabsaneysa, naguna hoggaamisa tubta toosan oo Alle raalli inooka yahay. Aayada 11, ee suradda ALRACAD, waxay iyaduna leedahay ” Ilaah qoon ma dooriyo(qayiro) illaa ay iyagu is-dooriyaan(qayiraan)”.
" إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم " سورة الرعد.